Ixabiso lezenzo zabatyeleli | Martech Zone
NgeCawa, Oktobha 24, 2010 NgoMvulo, nge-15 kaDisemba ngo-2014 Douglas Karr
Silinganisela kakhulu nge kubahlalutyi, kodwa asihlali sibeka ixabiso kwinto nganye ethathwa lundwendwe xa benxibelelana nathi kwi-intanethi. Kubalulekile ukuba iinkampani ziqwalasele ngaphezulu kokundwendwela kunye nokuguqula… kukho itoni yokunxibelelana phakathi nasemva kokubonelela ngexabiso.
Kule tshathi ingentla ndinee-axis ezimbini… ifuthe nexabiso. Njengeendwendwe ezifana, Phinda ubhale, umqhubi kwaye landela wena okanye ishishini lakho… kukho impembelelo, ingekuba ngenxa yokuba undwendwe lusondele ekuthengeni, kodwa kungenxa yokuba bayandisile iinjongo zabo kunye nokuvuma kwabo kuthungelwano. Bona akunoku bade bathenge, kodwa ukuba banefuthe elikhulu, ifuthe labo linokutyhala abanye abaninzi ukuba bathenge.
Ezinye izinto ezenziwa ziindwendwe zakho zibalulekile… ukubhalisela i-imeyile okanye i-RSS, iwebhu, ukubiza isebe lakho lokuthengisa ... Amashishini aneenkqubo ezizenzekelayo ezithetha kwakhona kubathengi abashiya inqwelo yabo yokuthenga bayakuqonda ukubaluleka kwecandelo. Kuba bebekufutshane kakhulu ekuthengeni, banokufuna nje ipush encinci okanye isikhumbuzi… okanye nexesha lokugcina imali eyimfuneko yokuthenga.
Emva kokuthenga okanye ukuvuselela, kukho ezinye izinto ezonyusa ifuthe lentengiso-ukulinganiswa kunye nokuvunywa kwemveliso ethengiweyo. Ukulinganiswa kunefuthe elinamandla ekubeni ithemba liyathenga okanye hayi. Ukungqinisiswa komntu okanye ukuphononongwa kwemveliso kunzima kakhulu.
Njengoko uceba isicwangciso sakho sokuthengisa kwi-intanethi, qiniseka ukuba ulandele isenzo ngasinye esinokuthathwa lundwendwe. Ukubonelela ngokusebenzisana kunye namaphulo okuhambisa kwakhona ukuwahambisa ukusuka kwelinye inyathelo ukuya kwelinye ngokufanelekileyo. Konke kuhlala kwenzeka ukuba ithemba lishiye indawo yakho kwaye uphulukane nentengiso kuba bekungacaci ukuba bahambe njani ukusuka kwelinye inyathelo ukuya kwelinye kwindawo yakho. Nika indlela ecacileyo yokundwendwela kunye nabakhenkethi bakho. Nika iindlela ezininzi zeziphumo ezingcono.
tags: inaniumsebenzi weendwendweUkuziphatha kweendwendweIxabiso leendwendwe
Ulungile, Umlilo, Injongo